Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ » Ihe ngosi OTDYKH na Russia nwere ihe ịga nke ọma
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Akụkọ na -agbasa Russia • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Ihe ngosi ezumike OTDYKH na Russia
Mbipụta nke 27 nke OTDYKH Ntụrụndụ Ntụrụndụ dị na Russia agwụla, ọ bụkwa nnukwu ihe ịga nke ọma. Ọ malitere na Septemba 7 ruo 9 na Expocentre Fairgrounds na Moscow. N'afọ a, ụlọ ọrụ 450 dị ịtụnanya sonyere, site na mpaghara Russia 41 na mba 23 dị iche iche.
Ihe ngosi ngosi nka OTDYKH gosipụtara ụlọ ọrụ 450 sitere na mpaghara Russia 41 na mba 23 dị iche iche.
Ihe karịrị ndị ọbịa azụmahịa 6,000 gara n'ihu na ebe ngosi, yana ihe karịrị mmadụ 3,000 sonyere na ntanetị.
Ihe ngosi ahụ gosipụtara ihe omume azụmahịa 30 nwere ndị na -ekwu okwu 160 na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị sonyere 1,500.
Mba ndị sonyere na ngosi ngosi OTDYKH nke 2021 bụ: Azerbaijan, Belarus, Brazil, Bulgaria, China, Cuba, Cyprus, Egypt, Germany, India, Iran, Italy, Japan, Jordan, Lithuania, Moldova, Peru, Spain, Sri Lanka, Thailand, Tunisia, na Venezuela.
Afọ a bụ OTDYKH Ntụrụndụ Fair Ememe ọtụtụ ndị bịara mmemme ahụ, gụnyere obodo Azerbaijan, mpaghara Ceará na Brazil, ọchịchị Tottori na Japan na ụlọ ọrụ, Sri Lankan Airlines.
N'ime mpaghara 41 Russia nke eji nganga na-anọchite anya ngosi ahụ, enwekwara ụfọdụ ndị bịara ọhụrụ na-atụ anya. Ndị a bụ mpaghara Yugra, Territory Krasnoyarsk, Tomsk, Chelyabinsk, mpaghara Rostov na Omsk na Republic of Udmurtia.
Ndị bịara ngosi ahụ ruru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 10,000 ma mmadụ ma ọ fọrọ nke nta. Ihe karịrị ndị ọbịa azụmahịa 6,000 bịara n'onwe ha na ngosi ahụ ebe ihe karịrị mmadụ 3,000 soro ihe ngosi ahụ site na nyiwe ịntanetị. Site n'ịkwado usoro ndị ọzọ dị n'ịntanetị, ihe ngosi ahụ nwere ike ịgbatị ihe ngosi ahụ nye ndị sonyere si n'akụkụ ụwa niile.
Ọzọkwa, ihe ngosi ntụrụndụ OTDYKH gosipụtara ọtụtụ ndị mmekọ, ma ụlọ ma mba. Ihe ngosi a nwere nganga ịnya isi Egypt dị ka mba ibe ya n'afọ a nwere ọmarịcha nguzo na nnukwu ndị nnọchi anya ya. Mpaghara ibe ya bụ Nizhny Novgorod na obodo ibe ya bụ St. Petersburg. Ndị ọrụ mmekọrịta ihe omume a bụ mpaghara Altai na Republic of Khakassia. Onye ọrụ na -ahụ maka njem nlegharị anya bụ Academservice. N'ikpeazụ, onye ọrụ ibe ya bụ Sberbank, ụlọ akụ kacha ibu na Russia na otu n'ime ụlọ ọrụ na -ahụ maka ego n'ụwa niile.
N'agbanyeghi mmachibido njem njem zuru ụwa ọnụ ugbu a na oke mechiri emechi, ndị na -egosi mba ụwa si n'akụkụ ụwa niile sonyere. Na nloghachi dị ebube na ngosi ahụ, ọ bụghị naanị na Egypt bụ mba ihe ngosi ahụ, mana o zigara ndị nnọchi anya ya na ngosi ahụ, nke onye a na-akwanyere ùgwù, Minista njem na ihe ochie nke Egypt, Mr Khaled al-Anany. Ọkwa dị elu nke mmasị ndị ọkachamara n'ihe omume nke afọ a bụ n'ihi ịmaliteghachi ụgbọ elu na-aga n'etiti Hurghada na Sharm el-Sheikh na obodo 41 na Russia.
Aha pụrụ iche na-aga na ụlọ ọrụ nkwalite nkwalite njem nlegharị anya nke Sri Lanka bụ onye gosipụtara ihe pụrụ iche, nnukwu nnukwu ụlọ ọrụ na-egosi ihe ngosi iri na atọ. Sri Lanka gosipụtara nnukwu ndị nnọchi anya nke ministri na -ahụ maka njem na njem ụgbọ elu, Hon. Ranatunga Prasanna. Na mgbakwunye na nke a, ụgbọ elu Sri Lankan sonyere na nke mbụ n'akụkọ ihe ngosi ahụ, na -enwe nkwụsi ike nke ha.
okwu ọnụọgụ abụọ
Latin America nọchiri anya ya nke ọma na ngosi nka OTDYKH nke 2021; Cuba gosipụtara akara mgbanwe ka ọ laghachi n'ụdị usoro ọrịa na-efe efe nke igosi ya na 100m² nke ya. N’ememe mmeghe, onye osote onye minista njem nlegharị anya nke Cuba, Maria del Carmen Orellana Alvarado kwuru na Cuba na-agbasi mbọ ike ka ọ bụrụ ebe nchekwa maka ndị njem ma jiri nwayọ na-akwado ịmalitegharị ókèala ya. N'ihi nke a, site na Nọvemba 15, 2021, gaa n'ihu, Cuba ga -akagbu nnwale COVID PCR dị mkpa maka ndị njem, kama a ga -eme nnwale nnwale mgbe ị bịarutere.
Agbanyeghị na ọtụtụ mba ọdịda anyanwụ Europe ka mechiri ókèala na mgbochi njem, enwere ezigbo ahụike sitere na Europe. Bulgaria, Spain, na Saịprọs niile nwere ọkwa nke ha, ebe ihe ngosi ndị ọzọ gụnyere Italy, Germany, na Lithuania.
Ndị ọhụrụ a kpọtụrụ aha Azerbaijan nwere mmetụta na nguzo dị egwu ha na ụlọ ọrụ 18 na -esonye. Ha mekwara mmemme dị iche iche ma soro ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya Russia na ụlọ mgbasa ozi na-eme nzukọ B2b. Nke a butere ịmalite mkparịta ụka na -aga nke ọma n'etiti Russia na Azerbaijan.
Enwere ọtụtụ isi ihe ngosi Ntụrụndụ OTDKYH nke 2021, gụnyere ọtụtụ nkwekọrịta gọọmentị bịanyere aka na ya. Obodo ibe St. Petersburg bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta atọ, otu n'ime ha bụ nkwekọrịta n'etiti St. Petersburg na Moldova imekọ ihe ọnụ na ịrụkọ ọrụ ọnụ na ụlọ ọrụ njem.
Oge ọzọ dị mkpa na ihe ngosi ahụ bụ mbinye aka nke nkwekọrịta mpaghara iji mepụta okporo ụzọ Russia etiti, M-12. Otu ọmarịcha mpaghara Russia ise bịanyere aka na nkwekọrịta ahụ: Moscow, Republic of Tatarstan, mpaghara Vladimir, mpaghara Nizhny Novgorod, na Chuvash Republic.
N'ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, Mmemme Azụmaahịa a na -akwanyere ùgwù bụkwa ihe ịga nke ọma, na -anya isi ihe omume 30 nke ndị ọkà okwu 160 bịara na ndị nnọchi anya 1,500 dị ịtụnanya. Isi ihe dị na mmemme azụmahịa bụ nnọkọ na atụmatụ akpọrọ, Ọdịnihu nke njem, usoro njem. Ihe omume a gosipụtara na ọ bụ mkparịta ụka na -agba ọsọ n'etiti ọtụtụ ndị ozi ala ọzọ nke njem na ndị nnọchi anya Rostourism na UNWTO.
Na mmechi, ọzọ mbipụta ọhụụ nke OTDYKH Ntụrụndụ Ntụrụndụ bụ ọmarịcha ihe ịga nke ọma na ụlọ ọrụ 450 sonyere na mpaghara 41 Russia na mba 23 dị iche iche. Ihe ngosi a nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị bịara 10,000, ma na mmadụ ma na ntanetị.
Kọmitii Expo OTDYKH na -ekele onye ọ bụla sonyere na ihe ngosi ahụ, ha na -atụkwa anya ihe omume nke afọ na -abịa, ka ha na -aga n'ihu na -emebi ala ọhụrụ na ụlọ ọrụ njem mba ofesi.